यस साइट को बारे मा
नमस्ते एडब्लक प्रयोगकर्ता ...
यस्तो लाग्छ कि तपाईं थोरै हराउनुभएको छ ...
नाजी जर्मनी पुस्तकहरु
नाजी जर्मनी क्रसवर्ड - एडोल्फ हिटलर
नाजी जर्मनी क्रसवर्ड - प्रारम्भिक नाजी नियम
नाजी जर्मनी क्रसवर्ड - जीवन र काम
नाजी जर्मनी क्रसवर्ड - नाजिज्मको उत्पत्ति
नाजी जर्मनी क्रसवर्ड - जातीय नीतिहरू
नाजी जर्मनी क्रसवर्ड - युद्धको लागि मार्ग
नाजी जर्मनी क्रसवर्ड - वेमर रिपब्लिक
नाजी जर्मनी शब्दकोष
नाजी जर्मनी कागजात
नाजी जर्मनी निबन्ध प्रश्नहरू
नाजी जर्मनी मेमोरी क्विज - विरोधी नाजी आंकडा
नाजी जर्मनी मेमोरी क्विज - घटनाहरू 1918-23
नाजी जर्मनी मेमोरी क्विज - घटनाहरू 1924-32
नाजी जर्मनी मेमोरी क्विज - घटनाहरू 1933-39
नाजी जर्मनी मेमोरी क्विज - समूहहरू
नाजी जर्मनी मेमोरी क्विज - विचारहरू
नाजी जर्मनी मेमोरी क्विज - नेताहरू
नाजी जर्मनी मेमोरी क्विज - सर्त र अवधारणा (I)
नाजी जर्मनी मेमोरी क्विज - सर्त र अवधारणा (II)
नाजी जर्मनी मेमोरी क्विज
नाजी जर्मनी क्विज - आर्थिक नीतिहरू
नाजी जर्मनी क्विज - हिटलर
नाजी जर्मनी क्विज - जीवन र काम
नाजी जर्मनी क्विज - जातीय नीतिहरू
नाजी जर्मनी क्विज - नाजी राज्य
नाजी जर्मनी क्विज - NSDAP
नाजी जर्मनी क्विज - युद्धको बाटो
नाजी जर्मनी क्विज - वेइमर रिपब्लिक
नाजी जर्मनी क्विज गर्दछ
नाजी जर्मनी विषयहरू
नाजी जर्मनी को हो
नाजी जर्मनी वर्डसर्च - अवधारणाहरू
नाजी जर्मनी wordsearch - व्यक्ति
नाजी जर्मनी वर्डसर्च - स्थानहरू
नाजी जर्मनी wordsearches
कथा नाजी जर्मनी लाखौं मानिस मोहित र भयावह छ। यो Weimar रिपब्लिक को असफलता संग शुरू भयो र दोस्रो विश्व युद्ध र प्रलयको त्रास संग समाप्त भयो। बीचमा, नाजिज्मले लाखौं मानिसहरूलाई असर गर्यो र आधुनिक इतिहासको मार्ग परिवर्तन गर्‍यो।
नाजीहरू कट्टरपन्थी राष्ट्रवादीहरूको समूह हो जसले 1919 मा आफ्नै राजनीतिक पार्टी गठन गरे। नेतृत्वमा हिटलर, एक पूर्व कर्पोरल जसले पहिलो विश्वयुद्धमा सेवा गरेका थिए, नाजी पार्टी अधिकांश 1920 को लागी सानो र अप्रभावी बने।
को शुरुआत ठूलो अवसाद र जर्मनीमा यसको दर्दनाक असरले हिटलर र नाजीहरूले बढी समर्थन लिएको देखे। नाजीहरूले निराश जर्मन जनताको लागि आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गरे। यद्यपि हिटलर र नाजीहरूको बारेमा केही नयाँ थिएन। उनीहरूको अधिकांश जुनून - राज्य शक्ति, तानाशाही शासन, कट्टर राष्ट्रवाद, सामाजिक डार्विनवाद, जातीय शुद्धता, सैन्य पुनर्निर्माण र विजय - थिए भविष्यको होईन, विगतका विचारहरू.
1930 द्वारा, नाजीहरू जर्मनमा सब भन्दा ठूलो पार्टी भइसकेका थिए Reichstag (संसद) यस समर्थनलाई योगदान पुर्‍यायो एडोल्फ हिटलरको कुलपतिको नियुक्ति जनवरी 1933 मा।
हिटलर र उनका अनुयायीहरूले मुश्किलले एक दर्जन बर्षसम्म सत्ता पाए तर जर्मनीमा उनीहरूको प्रभाव गहिरो थियो। केही वर्षमै नाजीहरूले प्रजातन्त्र र एक पार्टी एकल अधिनायकवादी राज्य बनायो.
लाखौं जर्मनको जीवन परिवर्तन भएको थियो, केहि उत्तमको लागि, धेरै धेरै खराबको लागि। महिला घर फर्कन आदेश दिइयो र राजनीति र कार्यस्थलबाट अलग गरियो। बच्चाहरु नाजीवादका विचारहरु र मूल्यहरु संग उत्प्रेरित थिए। स्कूलहरू र कार्यस्थलहरू नाजी उद्देश्यहरू पूरा गर्न परिवर्तन भएका थिए। कमजोर वा विघटनकारी सामाजिक वा जातीय समूह - बाट यहूदीहरू गर्न मानसिक बिमारी - हटाइएको वा हटाइएको थियो।
नाजीहरूले पनि संसारको अवहेलना गरे सरदार सैन्यवादलाई पुनर्जीवित गर्दै त्यसले दुई दशक अगाडि जर्मनीलाई पहिलो विश्वयुद्धमा पुर्‍याएको थियो। अन्तमा, 1930s को अन्ततिर, हिटलरले जर्मन क्षेत्रको विस्तार गर्ने बारे सेट गर्‍यो, यो नीति जसले मानव इतिहासको सबैभन्दा खतरनाक युद्धलाई निम्त्यायो।
अल्फा हिस्ट्रीको नाजी जर्मनी वेबसाइट 1933 र 1939 बीच नाजी र जर्मनीको वृद्धि अध्ययन गर्न विस्तृत पाठ्य-गुणस्तरको स्रोत हो। यसले विस्तृत सहित सयौं विभिन्न प्राथमिक र माध्यमिक स्रोतहरू समावेश गर्दछ शीर्षक सारांश र कागजातहरू। हाम्रो वेबसाइट मा सन्दर्भ सामग्री पनि समावेश छ टाइमलाइनहरू, शब्दावलीहरू, एक 'को हो' र जानकारी इतिहास लेखन। विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो ज्ञान परीक्षण गर्न सक्दछन् र सहित अनलाइन गतिविधिहरूको दायराको साथ रिकल गर्न सक्छन् quizzes, शब्दकोष र wordsearches। प्राथमिक स्रोतहरू पछाडि, अल्फा ईतिहासमा सबै सामग्री योग्य र अनुभवी शिक्षकहरू, लेखकहरू र ईतिहासकारहरूद्वारा लेखिएका हुन्।
प्राथमिक स्रोतहरूको अपवादको साथ, यस वेबसाइटमा सबै सामग्री © अल्फा ईतिहास 2019 हो। अल्फा ईतिहासको अभिव्यक्त अनुमति बिना यो सामग्री प्रतिलिपि गर्न, पुन: प्रकाशित वा पुनः वितरण गर्न मिल्दैन। अल्फा ईतिहासको वेबसाइट र सामग्री को उपयोग को बारे मा अधिक जानकारी को लागी, कृपया हाम्रो सन्दर्भ गर्नुहोस् उपयोग नियम.
यो साइट खोज्नुहोस्:
को को हुन्
विश्व युद्ध I